ဘုတလင်တွင် ကာလတန်ဖိုး ကျပ် ၉၇၅ဝဝဝဝ ရှိ မူးယစ်စိတ်ကြွ ဆေးပြား ၂ဝဝဝ နီးပါးခန့် ဖမ်းမိ - Yangon Media Group
ဘုတလင်တွင် ကာလတန်ဖိုး ကျပ် ၉၇၅ဝဝဝဝ ရှိ မူးယစ်စိတ်ကြွ ဆေးပြား ၂ဝဝဝ နီးပါးခန့် ဖမ်းမိ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာခရိုင် ဘုတလင်မြို့တွင် စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် ညပိုင်းက စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား၂ဝဝဝ နီးပါးခန့် သယ်ဆောင်လာသည့် လူငယ်နှစ်ဦးအား စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ တိုင်းမှုခင်းအကူဌာနစုမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ အဆိုပါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး လူလူသန်း၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် မြို့အဝင်အထွက်များ ကို လုံခြုံရေးအရ လှည့်လည်စောင့်ကြည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေစဉ် ခိုင်လုံသောသတင်းအရ မူးယစ်ဆေးဝါး သယ်ဆောင်လာနေကြောင်း အတိအကျသိရသဖြင့် ဘုတလင်မြို့အဝင် ဘိန်းခွန်ကောက်ခံသောဂိတ်တွင် စောင့်ဆိုင်း နေစဉ် မုံရွာ-ရေဦးလမ်းအတိုင်း မိုးဦးမောင် မောင်းနှင်လာသည့် ဆိုင်ကယ်အား ရပ်တန့်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ၎င်းနောက်မှ လိုက်ပါလာသော ညီမျိုးနိုင်အား ရှာဖွေရာတွင် ¤င်း၏ခန္ဓာကိုယ် ပေါ်ရှိ ဘောင်းဘီအတွင်း ဝှက်၍ယူဆောင်လာသော ၈၈/၁ စာတန်းပါ ပန်းရောင်စိတ် ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား အပြားရေ ၁၉၅ဝ ပြားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယင်းဆေးပြားများ၏ ကာလတန်ဖိုးမှာ ကျပ် ၉၇၅ဝဝဝဝ ဖြစ်ကြောင်း ဖမ်းဆီးရေးအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူ ရဲတပ်ကြပ် သန့်ဇော်က အတည်ပြုပြောကြားသည်။
”ကျွန်တော်တို့ နယ်မြေအတွင်း လှည့်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတုန်းမှာ ကျွန်တော့် အမာခံသတင်းပေးသူတစ်ဦးရဲ့ သတင်းပေး ချက်အရ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လူနှစ်ယောက် မူးယစ် ဆေးဝါးတွေ မုံရွာဘက်ကို လာရောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ အတိအကျရလို့ ဘုတလင်မြို့ဝင်ကနေ စောင့်ဖမ်းတာပါ။ ညီမျိုးနိုင်က သူ့သူငယ်ချင်း မိုးဦးမောင်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်ပို့ပေးရင် တစ်သိန်းပေးမယ်ပြောပြီး ခေါ်လာတာပါ။ အရှေ့ကမောင်းတာက ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ ပေါ့။ ညီမျိုးနိုင်ရဲ့ ခါးပေါ်ဘောင်းဘီကြားထဲ ဝှက်သယ်လာတာလေ။ အပေါ်ကအင်္ကျီဖုံးထားတော့ မသိသာဘူး”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ ထားသည့် လူငယ်နှစ်ဦးအား ဘုတလင်မြို့မ ရဲစခန်း မယ(ပ)၂/၂ဝ၁၇၊ မူးယစ်ဆေးဝါး နှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဥပဒေဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁ အရ ရဲအုပ်ကျော် နိုင်ဦးမှ တရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းပြီး အမှုစစ် ဒုရဲအုပ်ကိုကိုအောင်က စစ်ဆေးဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
စိုးမြစိုး( မုံရွာ )
မုန့်ဖတ်၊ ခေါက်ဆွဲများတွင် တာရှည်ခံဆေးနှင့် ချွတ်ဆေး အသုံးပြုနေခြင်းကို ရန်ကုန်တိုင်း အစိ
ယီမင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် အစိုးရတပ်များနှင့် ဟူသီ သူပုန်များတိုက်ပွဲဖြစ် သူပုန်ရှစ်ဦး ကျဆုံး
သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင် ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမ??
နောက်ထပ် အာဏာသိမ်းမှု လုပ်ဆောင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ထိုင်း ကာကွယ်ရေး အကြီးအကဲပြော
မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံပိုင် မယ်ဆိုင်ချောင်း မတိမ်ကောရေး၊ ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်ရေးတို့အတ?
အဂတိလိုက်စားမှု မကျဆင်းရခြင်း အဓိကအကြောင်းရင်းသည် အစိုးရဌာနများ၌ အရိုးစွဲနေသော အဂတိလိုက်စ?
ဓနုဖြူမြို့နယ်တွင် မြစ်ကမ်းပါးပြိုကျမှုကြောင့် နေအိမ် ၁၁ လုံးရေထဲပါ
ဖားကန့်မြေစာပုံပြိုကျ ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေသူ ငါးဦးပျောက်ဆုံး
အမေရိကန် ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပိုမို တင်သွင်းဝယ်ယူရန် တရုတ် သဘောတူ